केही भारतीय चलचित्र मानक छन्, विश्वमा चिनिएका छन्। तर, भारतीय चलचित्र पुरस्कारमा तिनीहरू कमै सामेल हुन्छन्। आइफा विशुद्ध व्यापारिक प्रयोजनको कार्यक्रम हो। नेपाल सरकारले खर्च बेहोरेर काठमाडौँमा अनि नेपाल पर्यटन वर्षलाई सहयोग ? यो चाहिँ फाल्तु कुरा हो। कसले के प्रलोभनमा यस्तो कुरो गर्छन् ?
यो दुनियाँमा सबैभन्दा शक्तिशाली केही छ भने त्यो मान्छेको भ्रम नै हो।
आफ्ना खुशीमा सँगसँगै खुशी हुने, आफ्ना दुःखमा साथसाथै दुःखी हुने आत्मीय जन साथसाथमा, तपाईंकै वरिपरि छन् भने मान्नुस्– तपाईं सम्पन्न हुनुहुन्छ। सुखदुःख त सबका हुन्छन् तर साथमा सँगसँगै खुसी र दुःखी हुने आफन्त छैनन् भने सोच्नुस्– तपाईंले केही गुमाउनुभएको छ।
भुटानबाट सिक्नुपर्ने धेरै कुरा छन्, जसमध्ये शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको लगानी र राज्यको जिम्मेवारी प्रमुख हुन्। तर, हामी त मुलुकको धरातलीय क्षेत्रफल नाप्न सकेका छैनौँ, सगरमाथाको उचाइ नाप्न हतार गर्छाैं। दुःखका खाडल पुर्न सकिएको छैन, खुशीको उचाइ नाप्ने कुरा गर्छाैं।
अरूले आफूलाई कसरी हेरिरहेछन् वा के भन्लान् भन्ने डरले व्यक्तिहरू पछि पर्छन्। तर, सरकार अरूले आफूलाई कसरी हेरिरहेछन् वा के भन्लान् भन्ने डर मान्न थालेको समयदेखि अगाडि बढ्न थाल्छ। यहाँ धेरै सरकारकै नियतमाथि प्रश्न भए। व्यक्ति प्रतिवाद गर्न सक्छ। सरकारले पनि त्यसै गरे, अर्थाेक नै केही हुन्छ।
यो नेपाली संस्कृति भन्ने पनि तोरी कुरा रैछ। मेरो मानवशास्त्रीय तालिम बेकामे भयो। खोटी शास्त्र पढिएछ कि झैँ लाग्ने कहिलेकाहीँ त।
पत्रकारिता आफैँमा कुनै सुविधाको पेशा होइन। यसका अनेक अप्ठेरा छन्। तर, मुलुकको लोकतान्त्रिक पद्धति र नागरिकको आधारभूत अधिकारको रक्षा गर्न मिडियाको निकै महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यसैले पत्रकार सम्मानित छन्। तर, पेशा र पहुँचलाई दुरुपयोग गर्नेले समग्रमा पेशाकै बदनाम गर्ने हुन्।
सबै–सबैलाई सम्राट बन्न परेकै छ, त्यो हिंसाको साम्राज्य नै किन नहोस् !
‘तपाईंसँग कुखुराको धड्कन सुने मन खोइ ?’
शहरमा आजकल यस्ता प्रश्न सोध्न थालिएछ। केही आविष्कार हुँदै छजस्तो छ।
समाचारहरू सुखद छैनन्। पटक्कै सुखद छैनन्। किन हाम्रो नियति नै खराब समाचारहरूसँग दिनको सुरुवात गर्नुपर्ने भएको छ ? यो कस्तो अन्धकारतर्फ जाँदै छौँ, जहाँ भोलिको उज्यालोको आभास पटक्कै छैन।
‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’को जोश र उमंगसहित निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि नै ‘यस्तै हो भने संघीयता भन्ने पनि टिक्दैन’ भन्न थालेका छन्। स्थानीय सरकारलाई सरकार बन्न सहज बनाए हुने, सरजीहरू ! सिंहदरबार र टीभीको पर्दामा भनिएको कुरा र गाउँमा बेहोर्नपर्ने कुरा त फरक पर्दै छ।